व्यावसायिक रुपमा गरिएको गोलभेंडा खेतीमा विक्रीका लागि गोलभेंडा टिप्दै किसान
फागुन २३, दैलेख । दैलेखको आठबीस नगरपालिका–३ कुमालखाडीवासी तरकारी व्यवसायबाट आत्मनिर्भर बन्दै गएका छन् । गुजाराका लागि मात्र तरकारी फलाउँदै आएका किसान व्यावसायिक तरकारी खेती गर्न थालेपछि आत्मनिर्भर बनेका हुन् ।
तरकारी उत्पादन गर्नथालेपछि आम्दानीका साथै कुमालखाडा गाउँको नामसमेत बदिलएको स्थानीय बासिन्दा पवित्रा माझीले बताइन् । ‘पहिला गाउँलाई कुमालगाउँ भन्थ्यौं, आजभोलि तरकारी नमूना गाउँ भनेर चिनिएको छ, विदेशिएका पुरुषसमेत मुग्लानबाट फर्केर तरकारी खेतीतिर लागेका छन्, कसैले तरकारी खेतीको व्यापारबाट तराईमा घडेरीसमेत किन्न योजना बनाएका छन्’, उनले भनिन् ।
आजभोलि तरकारी खेती देखेर सोही ठाउँकी ६५ वर्षीया धना कार्की दंग छिन् । विगतका दिन सम्झिदै उनले भनिन्, ‘पहिला हामी आलु, चना, मुसुुुरो केराउ लगाउथ्यौं, काउली, बन्दा, गोलभेडाको चलन थिएन, नून र खुर्सानीसँग छाक टार्थ्यौ, पाहुना आएको दिनमा छरछिमेकीबाट दही दूधको जोहो गर्नु पर्थ्यो ।’
तरकारीले आफ्नो जीवनमा समेत परिवर्तन ल्याएको अर्की महिला नानीदेवी शाहीले बताएन् । केही वर्षपछि कर्णाली राजमार्गको ट्र्याक खोलिएपछि आम्दानीको आशा बोकेका कुमालाखाडीवासीको भने मुग्लानसँगको साइनो छुटेन । पैसा कमाउन भारत नै जानुपर्छ पुरानो चलनले निरन्तरता पाइरह्यो । बस्तीमा स्वदेशमै बसेर आम्दानी हुन्छ भनेर सम्झाउने व्यक्ति थिएन ।
‘कालापहाड नगएर कहाँ जाने जहान परिवार पाल्न पराइदेशमा पसिना बगाउनुपर्ने बाध्यता थियो’, स्थानीयवासी धर्मराज कार्कीले भने, ‘तलतिर कर्णाली नदी, सिलेटको छाना परम्परागत शैलीमा निर्माण भएका घरले सुन्दरबस्ती पराइदेश जाने पुरुषको लर्कोले गाउँ नै सुनसान देखिन्थ्यो, गाउँमा कोही दुःखी बिरामी पर्दा महिला नै हुन्थे ।’
पुरुषविहीन हुँदा सुनसान बस्तीमा अहिले मानिस आवतजावतले रमझम बेग्लै छ । नूनखुर्सानीको साहारामा छाक टार्ने गरेका कुमालखाडीवासी तरकारी उत्पादन गरेर आम्दानी गर्न थालेका छन् । त्यहाँ विदेशिनेको संख्यामा कमी आएको छ । घरमै बसेर महीनामा रू. २० हजारदेखि रू. ३० हजारको आम्दानी गर्ने गरेको उनीहरु बताउँछन् । कुमालखाडावासीको तरकारी सुर्खेतसम्म निर्यात हुने गरेको छ ।
कृषकले बारीमा काउली, बन्दा, गाँजर, मुला, गोलभेडा उत्पादन गर्दै आएका छन् । एउटै सिजनबाट एउटै गरा तरकारीबाट आफूले रू. १२ हजार आम्दानी गरेको स्थानीयवासी शान्ति सिजापतिले बताए ।
तरकारी खेती उत्पादन गर्दै आइरहेका कुमालाखाडा नमूना गाउँ बनाइने भएको छ । आठबिस नगरपालिका र युरोपियन युनियन, डिसिए नेपालको आर्थिक सहयोगमा सोसेको सहजीकरणमा गाउँलाई तरकारीको नमूना गाउँ बनाउन लागिएको हो । नमूना गाउँ बनाउन युरोपियन युनियन र डिसिए नेपालले झण्डै रू. नौ लाखको लगानी गरिसकेको छ ।
नमूना गाउँ बनाउनका लागि कृषकले गोठेमल सुधार, घरआँगन सरसफाइ, फोहर पाल्ने खाल्डो, जुठ्याल्नु बनाउनु पर्नेछ । व्यवसायिक तरकारी खेती, मूल्य शृङ्खलाअनुसार गोलभेडा, काउली, आलु, बदामलगायत छ वटा नगदेबालीलाई अगाडि बढाइने सामाजिक सेवा केन्द्रका उप कार्यकारी निर्देशक वसन्त श्रेष्ठले बताए ।
कृषकले लगाएको तरकारी खेतीमा समस्या नआउहोस भन्नेको लागि सहयोगी संस्था सोसेकले दुई कृषि प्राविधिक कर्मचारी समेत खटाएको छ । रासस